Faritra Sofia: nitotongana ny vidin’ny lavanila | NewsMada
Faritra Sofia: nitotongana ny vidin’ny lavanila
Distrika dimy ao amin’ny faritra Sofia mamokatra lavanila betsaka. Ahitana izany ny any Befandriana Avaratra, Mandritsara, Analalava, Antsohihy, Bealanana. Any Port Bergé sy Mampikony ihany no tsy ahitana io vokatra io ao amin’ny faritra Sofia. Mampitaraina ny mpamboly ny vidim-bokatra latsaka ambany, 50 000 Ar ny kilaon’ny lavanila maitso, raha 200 000 Ar izany ta­min’ny taon-dasa. Talohan’io 50 000 Ar io, nokajina eo an­elanelan’ny 70 000 -80 000 Ar ny handraisana lavanila maitso amin’ity fotoam-piotazana ity. Miandry ny toromarika avy amin’ny minisiteran’ny Indostria, varotra, sy asa tanana (Mica) momba izay vidiny izay.
Tsy fantatra marina firy taonina ny vokatra amin’ity taona ity fa vinavinaina ho 60 t ny avy ao amin’ny distrikan’i Mandritsara irery, mitovitovy tamin’ny fotoam-piotazana farany. Ny any Antsohihy, ahitana ny orinasa Sahanala mikarakara manamaina ny vokatra, ma­no­me asa 150, indrindra ho an’ny vehivavy. Misy amin’ireo mpan­­draharaha mitaona ny vokatra amin’ny angindimby noho ny faharatsian’ny lalana. Tsy misy fanamboarana ny lalana ma­mpifandray ny kaominina rehetra, vao mainka nesorina tao amin’ny tetibolam-pan­jakana 2020 ny fanamboaran-dalana any amin’ny distrikan’i Be­fandriana Avaratra. Manampy izany olana izany ny asan’ny jiolahy mpangalatra lavanila.
Midina any amin’ny kaominina rehetra ny mpiasa avy amin’ny Ivonketra. Nambaran’izy ireo fa tsy maintsy atao ny fanaraha-maso toy ny teo aloha, satria betsaka ny misehatra amin’ity fihariana ity nefa tsy manambara ny tena marina ny vokatra miakatra sy ny vidiny. Atao ny fisavana miaraka amin’ny mpitandro filaminana, tsy ho fampitahorana akory fa ho fampanarahan-dalàna ny rehetra, raha ny nambaran’ireo mpiasan’ny Ivonketra ireo.